Karatra filalaovana mety manazava ny fiainana tao Japana nobodoina taorian’ny ady · Global Voices teny Malagasy
Asongadin'ny karatra ny endrika mora tazana andavanandrom-piainan'i Japana-aorian'ny-ady: Miaramila Amerikanina
Voadika ny 14 Desambra 2020 3:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, Italiano, українська, Português, English
“Amin'ireo kilongan'ny firenena vahiny hatrany ny miaramila amerikanina no maka namana voalohany.” Miaramila etazonia iray manolotra vatomamy amin'ny kilonga japoney tamin'ny fanombohan'ny fotoana nibodoan'ny Mpiara-dia [alliés]. Pikantsary avy amin'ny “Japan: Ny mpiara-dia amintsika departemantan'ny fiarovana farany atsinanana. Departemantan'ny Tafika. Biraon'ny Lefitry ny Lehiben'ny Ekipa mpanao Bemidina. U.S. Army Audiovisual Center. (ca. 1974 – 05/15/1984).” Azon'ny rehetra ampiasaina, nampiatrano azy ao amin'ny YouTube Nuclear Vault.
Kisendrasendra no nahitana ny topimason'ny niainan'ny ankizy ny fibodoana ny firenena taorian'ny ady.
Nisioka ny mpanoratra sady mpanentana Matt Alt tamin'ny 21 Novambra fa nahatsikaritra andiana karuta (karatra filalaovana) nivoaka tamin'ny andron'ny fibodoan'ny Mpiaradia an'i Japana, hevitreverina ho vao vita ny ady lehibe faharoa. Nilaza tamin'ny Global Voices izy fa nahita ireo andian-karatra ireo izy raha nitety ny tsena malaza Kobo-ichi misokatra isaky ny faha-21 ny volana ao Kyoto,
Nampiasaina tamin'ny menko, karatra nentim-paharazana filalaovan'ny ankizy, itony karatra ntaolo itony no tsy isalasalana ho nampisongadina endrika nisongadina indrindra rehefa nifarana ny ady tao Japan: miaramila amerikana.
Nahita karuta (angon-karatra) tsy manampaharoa, ahitana songadina miaramila amerikana nataon'ny orinasa japoney mpamokatra kilalao nandritra ny Fibodoana (1945-1952) aho. Kilalao tsy fahita firy, nanomboka nankafy fatratra ireo miaramila amerikana ny ankizy. Ireo teny anglisy voalohany fantatry ny maro dia ny “hello” [ahoana], “give me chocolate” [omeo sôkôlà aho] ary “Jeep”
Avy any Etazonia i Alt ary mpanentana tamin'ny fandaharana fahitalavitra malaza iray ao amin'ny NHK momba ny kolontsaina pop japoney Japanology Plus. Izay ihany koa no mpanoratra ny boky vaovao malaza iray, “Pure Invention: How Japan’s Pop Culture Conquered the World” [famoronana madiodio: Ahoana ny nambaboan'ny kolontsaina Pop-n'i Japan an'izao tontolo izao], ary niara-nanoratra tamin'i Hiroko Yoda kosa, izay mpanoratra andiam-boky malaza momba ny olona na biby mahatsiravina japoney antsoina hoe “Yokai Attack!“. Vao haingana i Yoda sy i Alt no nandika an'i Doraemon, andiana manga be mpankafy indrindra ao Japan, izay manana pejy mihoatra ny 12.000.
Taorian'ny faharesen'ny firenena tamin'ny aogositra 1945, nobodoina sy nofehezin'ny tafika mpiaradia i Japana mandra-pahatonga ny taona 1952 (mbola nofehezin'ny tafika amerikana ny nosy Okinawa mandrapahatonga ny taona 1972). Nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fibodoana an'i Japana ny tafika amerikana.
Raha noezahan'ny hery mpibodo ny hanaisotra ny fitaovam-piadiana sy hamafa ny tafik'i Japan, ny faharavana, ny hanoanana ary ny fikorontanana ara-pirahamonina tao amin'ny firenena no nahatonga ny miaramila ho mpanangana ny firenena. Tao amin'ny firenena iray ravan'ny ady, nanome sôkôlà sy vatomamy ny miaramila amerikanina, ary lasa hita hatraiza hatraiza amin'ny fiainana andavanandro ao an-toerana raha mandrindra ny fifamoivoizana, manao fiambenana amin'ny tranom-panjakana na mizara ny zavatra ilaina andavanandro ry zareo.
Izay angamba no antony nampisongadina ny hery (tafika) mpibodo tamin'ny karatra filalaovan'ny ankizy.
Matetika itony karatra, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe “menko”, itony ametrahana isa maneho ny “heriny” ao ambadika, tamin'ny lalao an-tsekoly. Mpitari-dalana tamin'ireo lalao karatra malaza amin'izao fotoana, toa ny Pokémon.
Misy ireo karatra mamoaka sariohatra mora fantatry ny rehetra manerana izao tontolo izao.
Dikatenin'ny lahatsoratra eo amin'ny karatra: “Baomba Hydrozenina”
NAOTY: The “PTA” would be the “parent-teacher association”, which still plays an important local community role in education in Japan.
Tsy mihevitra ho mahita an'i MacArthur aho (mety tonga dia hifandona amin'ny mpanivana izany?). Saingy mahita karazan-javatra an'ny miaramila aho, tahaka ny voatra tsotsotra ireo jeneraly, mpandaroka baomba, fitaovam-piadiana mavesatra, eny fa na hatramin'ny fitaovam-piadiana nokleary aza. Tsy nahafaly loatra ireo fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra izany*.
*Mbola manana anjara toerana lehibe amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana amin'ny fanabeazana ao Japan ny fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra.
Karuta ao Japan. Na dia ny goavan'ny lalao vidaka Nintendo tenany aza dia nanomboka tamin'ny karatra filalaovana sy ireo karazan-javatra hafa ho an'ny ankizy. Tarin Clanuwat, mpikaroka sady mpahay solosaina manana fahaizana manokana amin'ny famantaran-tsoratra, milina fianarana (machine learning) sy ny literatiora japoney (sady fantatra bebe kokoa ho @tkasasagi ao amin'ny Twitter), no vao namoaka andian-tsioka nanadihady ny tantaran'ny Nintendo sy ny karatra filalaovana:
Saripikan'ny foiben'i Nintendo tao Kyoto tamin'ny taona 1889 (vanim-potoana Meïji) raha vao naorin'ny mpandrafitra iray namokatra ny karatra Karuta, Yamauchi Fusajiro. Ny voambolana Nintendo dia azo raisina tsara hidika hoe « avelao ho an'ny lanitra ny vintana », saingy tsy misy ny lahatahiry ara-tantara afa-manamarina izany petra-kevitra izany.
Maodelin-karatra Hanafuda (mihevitra aho. andrana lasitra fanaovana printy izy ity) nandritra ny vanim-potoana Meïji, avy amin'i Nintendo
Raha te-hahita antsipiriany momba ny tantaran'ny karatra filalaovana ao Japan, ny Mitsuke School taloha tao Iwata, prefektioran'i Shizuoka no manana maro dia maro amin'izany
Misy mozea/sekoly fanabeazana fototra fahiny iray mahafinaritra izay ao Iwata-Shi manana maro dia maro ampirantiana! Manana sary maro dia maro aho, fa tsy misy afa-tsy iray isaky ny sioka azo atao 😭😭😭.